मात्रा स्टाइल कर्ल
आफ्नो प्रकृति द्वारा, बाल घुम्रेको वा सीधा छन्। एक सामान्य नियम जस्तै, धारकों कर्ल सीधा गर्छन, र सीधा कपाल ती, वेभी तिनीहरूलाई गर्न चाहन्छन्।
महिला कसरी हो छ। तिनीहरूले सधैं फरक र सधै माथि हुन अचम्ममा गर्न, चाहन्छु। उपस्थिति लागि, यो जो पहिचान परे छवि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ बाल, खेलिएको अन्तिम भूमिका छैन।
: आजको लेखमा कसरी स्टाइल कर्ल गर्न बारेमा छ घुम्रेको कपाल प्रकृति र विशेष र असहाय।
घुम्रेको कपाल स्वाभाविक छ
kucheryashek असामान्य संरचना मा: तराजू छैन प्रत्येक अन्य आसन्न कस, एक सामान्य कपाल जस्तै हो, र विभिन्न दिशामा प्रबन्ध मिलाए। त्यसैले तिनीहरू सधैं tangled जस्तो। साथै, तिनीहरूले धेरै नाजुक र चमक छैन।
मालिक कर्ल तिनीहरूलाई हेरचाह गर्न सबै समय र मेहनत आवश्यक:
हल्का र मइस्चराइजिंग प्रभाव संग विशेष शैंपू प्रयोग;
एक तौलिया soaking आन्दोलनहरु धेरै बिस्तारै सूखी;
यस ड्रायर देखि यो सबै दिन राम्रो छ;
कुनै पनि मामला मा RUB वा केश मोड छैन;
जबकि किसिमहरु अन्त गर्न ड्राई छन्, तिनीहरूलाई असम्भव comb;
रह्नुहोस, antistatic प्रभाव संग उपयुक्त कोर्नु पनि सट्टा यो केवल आफ्नो औंलाहरु संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पाँच मिनेट Hairstyles
घुम्रेको कपाल लागि कहिलेकाहीं तपाईं निर्देशित रूपमा निश्छल र एकै समयमा सुन्दर र स्टाइलिश केश पातलो र स्टाइलिश कोर्नु उनको टाउको मा बस राखे।
अर्को छिटो र किफायती विधि विधानसभा घुमावदार छ। यो गर्न, लुगा धुने पछि आफ्नो कपाल बाहिर सूखी हुनेछ जब, तिनीहरूले फिर्ता वा छेउमा भेला combing छैन, हुन, केही किसिमहरु पुल र रंग समाधान गर्न आवश्यक छ। यस्तो सरल केश राम्रो hairpin वा फूल थप्न भने, तपाईं उत्कृष्ट साँझ भेद प्राप्त।
एक पक्ष गर्न स्टाइल र कर्ल स्ट्राइकिङ्।
यहाँ प्राकृतिक कपाल कर्ल लागि केही uncomplicated प्रविधी हो।
Pigtail - किसिमहरु एक pigtail मा एक पक्ष गर्न फ्याँकिन्छन् र लट र बाँकी छाडा कर्ल अदृश्य सखाप।
पुच्छर - केश संकलित भएपछि, मुक्त सुझाव आधार वरिपरि बार लाउनु र त्यहाँ अर्को ब्यान्ड छ निश्चित छन्।
बाल ड्रेसिङ - आफ्नो टाउको मा राख्दै, उनीहरूले हङ कि यस्तो तरिकाले अगाडि केही किसिमहरु पुल गर्न सक्नुहुन्छ। स्टाइलिश स्टाइल प्राप्त गर्नुहोस्।
ठूलो कर्ल - ठूलो रोलर्स वा ठूलो शवर टाउको प्रयोग, तपाईं विशाल शानदार कर्ल हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
लापरवाह बीम - केश, त्यसपछि पिन वा अदृश्य द्वारा निश्चित छ जसले सबै गरेको बीम, एक ponytail मा संकलित छन् प्रत्येक जो तीन भागहरु, विभाजन गरिएको छ।
प्रत्यक्ष र स्टाइलिश
सीधा बाल को मालिक को मन मा अक्सर कर्ल शैली। तिनीहरूले एक शानदार केश र मात्रा बनाउन। एक घुम्रेको ताले को छवि रोमान्टिक र कोमल महिला मा महिलाहरु बनाउँछ।
त्यहाँ लामो कपाल मा एक सुन्दर केश बनाउन धेरै तरिकाहरू छन्। यसलाई सम्हाल्न एक विशेषज्ञ बिना एक महिला छैन जहाँ शक्ति अन्तर्गत भिन्न, जटिल हुन सक्छ, र त्यहाँ जो धेरै सानो प्रयास र पैसा आवश्यक थियो, तर अझै पनि प्रभावशाली हेर्नेछौं सरल छन्।
बाल स्टाइल कर्ल कसरी बनाउन सक्छौं? फोटो तलको हल्का विकल्प मध्ये एक देखाउँछ।
घुम्रेको विशेष उपकरण बिना
म पीडा गर्न curlers र कर्लिंग कपाल मा घाउ गर्न चाहँदैनन्? छैन!
यो, बाल mousse नम तिनीहरूलाई हल्कासित र सुक्खा hairdryer Mash लागू गर्न सकिन्छ। बाल स्टाइल, ठूलो कपाल र प्राकृतिक हेर्न भनेर ठूलो छालहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
अर्को विकल्प एक बन्डल र भिजेको कपाल मा सुकेको छ।
र अन्तमा, pigtails। धेरै समान चुल्ठो भिजेको कपाल लट र रात को लागि छोड्नुहोस्। आफ्नो छवि को बिहान नाटकीय परिवर्तन हुनेछ!
यो विधि हजुरआमा र आमा हामीलाई पास गरिएको छ। निस्सन्देह, ती पटक को रोलर्स आधुनिक देखि एकदम फरक। वर्तमान, उदाहरणका लागि, तातो रोलर्स संग तुलना, केश चोट छैन।
राती curlers छोडेर एक हेयर ड्रायर Strand तिनीहरूलाई सुक्खामा छैन।
त्यसैले, नम बाल लागू फोम सफा गर्न। को किसिमहरु सुक्खा हुँदा हटाइएका छन् जो curlers, मा कि हावा पछि। अर्को कपाल स्टाइल को एक मनपरी दिशा मा गरे। ताले वार्निश संग तय गर्दै र comb छैन। आवश्यक छ भने, तिनीहरूले विभाजित औंलाहरु हुन सक्छ।
सुन्दर कर्ल विधि लागू गरेपछि प्राप्त छन्। कर्लिंग फलाम diameters को एक किसिम मा आउनुहोस्। यो के हो, त्यसैले, फलस्वरूप, ठूलो र कर्ल प्राप्त छन्। हामी उपयुक्त आकार र हावा बाल चयन गर्नुहोस्। यसलाई पहिले तिनीहरूलाई एक mousse राख्नु किसिमहरु नराम्ररी चोट लाग्नु छैन मनमोहक छ। त्यसैले प्राप्त गर्न एक दीर्घकालीन स्टाइल, एकै समयमा कपाल चिटिक्क र सुन्दर रहनेछ।
कर्लिंग फलाम प्रयोग Hairstyles पूर्ण बिभिन्न प्राप्त हुन सक्छ। तपाईं, उदाहरणका लागि, ठाडो वा तेर्सो पर्म गर्न सक्नुहुन्छ। नरम कोमल छालहरू - पहिलो मामला मा कुंडलित किसिमहरु पानीका मुहानहरू resembling र दोस्रो हुनेछ।
यसरी, यो तिनीहरूले दृढ उच्च तापमान सार्न निकै कमजोर छन् किनभने, प्रक्षालित कपाल महिलाहरु को लागि प्रयोग गर्न राम्रो र रासायनिक perms गर्न subjected गरिएको छ छ।
फलाम बिछाउने गर्दा, निम्न विचार:
को किसिमहरु कोण कर्लिंग मा खींच नब्बे डिग्री नजिक हुनुपर्छ;
बाल लम्बाइ आधारमा स्क्रूड छ जो दोब्र्याइएको, को मोटाई: महान् आफ्नो नम्बर लिइएको छ उनि पनि छोटो, तर कुनै पनि मामला मा, लक चार भन्दा बढी सेन्टिमिटर हुनु हुँदैन।
कर्ल को प्रकार
चालीस पाँच डिग्री को एक कोण मा छड्के;
(बीस देखि बीस-पाँच सेन्टिमिटर बाल) एक सर्पिल को रूप मा ठाडो।
स्टाइल कर्ल कर्लिंग: तरिकामा कर्लिंग
किसिमहरु घुमाउरो गर्न सकिन्छ:
ठाडो: सर्पिल कर्ल वा कम;
तेर्सो माथि, तल र आठ।
यी ताले लागि ठाडो स्थिति कर्लिंग फलाम राख्न। को किसिमहरु सर्पिल घाउ छन्। त्यसपछि उनीहरूले तल cooled छ भनेर, र केवल त्यसपछि केश गर्न अगाडि बढ्न, एक सानो अब प्रतीक्षा छ।
Spirals एकैचोटि व्यक्ति निर्देशित गर्न सकिन्छ एक वा दुवै पक्षले। दायाँ स्क्रल को एक Strand भने, त्यसपछि फलाम तल कलम राख्न र अन्त गर्न महल बाट सुरू हुने, केश कर्ल गर्नुपर्छ। Forceps को ह्यान्डल अप पकड बायाँ र कर्ल अन्त देखि घाउ छन्। कर्लिंग बाल पछि कंघी छैन, र उनको कपाल मा राखिएको र वार्निश संग समाधान।
, को springy कर्ल प्राप्त र बलियो छन् अब तपाईं ringlets मा कर्लिंग राख्न: यो विधि संग, तपाईं निम्न मनमा राख्न आवश्यक छ।
प्रविधी तल दृष्टिकोण फरक Hairstyles सिर्जना गर्न। उत्तिकै राम्रो राम्रो र प्रकाश बाल बाहिर बारी र राउन्ड, भारी।
एक Strand विभाजित र नब्बे डिग्री को एक कोण मा झिकेर छ।
बाल बायाँ हात, कर्लिंग मा आयोजित - दाँया मा।
फलाम कर्ल गर्न ल्याउन, खोलियो र नाली र रोलर बीच राखिन्छ छ। त्यसपछि उनलाई ताले विस्तारै र ध्यानपूर्वक, को जरा देखि अन्त्य गर्न खर्च, त्यसैले कपाल वार्मिंग। एउटै समयमा टिप जाने छैन, र जाम छोड्न गर्छन्।
अर्को जलेको प्राप्त गर्न रूपमा त, रिज को आधार मा टाउको राखेर, को जरा गर्न Strand हावा।
सात सेकेन्ड सम्म कर्लिंग, यो स्थिति पकड।
को संडसी खोल्न र लक जारी।
ठूलो कपाल र ठूलो छालहरू - प्रविधी अप अन्य स्टाइल बनाउँछ। प्रायजसो यो अन्य विधिहरू साथ सँगै प्रयोग भएको छ।
सबै कार्यहरू अघिल्लो विधि मा जस्तै हो। मात्र फरक तेस्रो अनुच्छेद, जहाँ यो निशान तल स्थित भनेर लक कस्नु गर्न आवश्यक छ छ। त्यसपछि, रोलर माथि हुनेछ।
प्रविधिको मद्दत संग, "आठ" किसिमहरु spiraling छन्। को कर्लिंग समयमा अन्त कर्ल को यो मध्य-फलाम हुनेछ। यो स्थापना कार्य गर्दा कर्ल साँच्चै बलियो हुन्छन्। लामो कपाल गर्न मध्यम मा कर्ल धेरै प्रभावशाली हेर्न हुनेछ।
यो बाल कोर्नु गर्ने सुझावहरू गर्न कर्ल मा खुला सार्न सुरु सम्ममा ब्रश गर्नुपर्छ।
यो किसिमहरु को संख्या निर्धारण गरिन्छ र तिनीहरूले कसरी स्थित गरिनेछ।
दायाँ - बायाँ हात र forceps लिइएका जो छ एक Strand, अलग।
तकिया दोब्र्याइएको को जरा जाँदै भनेर कर्लिंग Strand कब्जा र कारोबार गरे र तपाईं नाली छ। एकै समयमा तपाईं Strand पुल गर्न आवश्यक छ।
पाँच सात सेकेन्ड को लागि प्रतीक्षा पछि, संडसी, कब्जा देखि पुल र तुरुन्तै अर्को बारी गर्छन्।
को संडसी एक हात, यो आठ उत्तेजित गर्दछ भनेर किसिमहरु पछाडि संग बाल कारखाना अन्य समाप्त घुमाउनुहोस्। को अन्त्य त forceps प्रत्येक पालो मा स्ट्याक गर्नुपर्छ। त्यसैले तिनीहरू सही थिए एक पटक भने, त्यसपछि तिनीहरूले छ अर्को समय बाँकी गर्न।
अर्को अघिल्लो रूपमा नै स्तर मा एक लक लो प्रयास गर्नुपर्छ।
Utyuzhok र लहर
जब बाल लक लागू आकर्षक कर्ल प्राप्त र तिनीहरूलाई utjuzhkom हिंड्न छन्।
एकाइ फरक प्लेट एक सेट छ रूपमा forceps-लहर को मदत पाएर प्रभाव को एक किसिम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
बिछाउने यो मामला मा निम्न तरिका गरिन्छ:
ड्राई सफा बाल लाह जो पछि तिनीहरूले comb, लागू गरिन्छ;
अस्थायी र occipital किसिमहरु विभाजित र हेयर क्लिप बाँकी स्थिर छ;
को Strand पाँच सेकेन्ड र जारी लागि सही उचाइ मा जानेबेलामा प्लेट राखिन्छ छ साथ;
त्यसैले थाकबनाउदै लक सम्पूर्ण लम्बाइ साथ गरिन्छ, र त्यसपछि - सबै विभाजित कपाल;
त्यसपछि बाँकी कपाल लिएको, parted बीचमा बाहिर खडा छ, र ताले यसरी राखिन्छ मा;
नालीदार किसिमहरु comb छैन।
सबै भन्दा राम्रो केश Rihanna
Ambre लामो कपाल मा: यो कसरी देखिन्छ र समीक्षा विवरण
Sukko को रिसोर्ट गाँउ "रूसी रिवेरा" को एक योग्य भाग हो। Sukko निजी क्षेत्र
Alushta। क्रिमीआ ठाँउहरु
तपाईं बीफ के पकाउन सक्छ